16 Inch Solar Powered Fan
Home > Ngwaahịa > 16 Inch Solar Powered Fan (Total 6 Ngwaahịa maka 16 Inch Solar Powered Fan)
16 Inch Solar Powered Fan - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara 16 Inch Solar Powered Fan manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube 16 Inch Solar Powered Fan na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime 16 Inch Solar Powered Fan na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Dc Fans Fans nwere ike ijide n'aka na onye nwere ike nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na volta na-adịghị ala ala na batrị nwere ike ịgbazue zuru ezu, onye na-akwado ya nwere ike ịgba ọsọ maka awa 5-8 mgbe ụgwọ ọ bụla. A na-enwe 100-220v dc (DC6V) fan...
60W Pancellicall Silicon Solar Panels
Tag: Solar Energy Polycrystalline Silicon Cell Panel , Ihe Ndị Na-ahụ Maka Ike Ike Ụlọ , Mpempe akwụkwọ na-enwu enyo
Mkpụrụ ndụ ndị dị na silicon cell polycrystalline nke dị na mbara igwe bụ ọgbọ ọgbọ nke mbara igwe dị na mbara igwe, bụ nke nwere uru dị ukwuu nke ịgbanwere akụrụngwa, ogologo ndụ nke mkpụrụ ndụ mkpụrụedemede monocrystalline na usoro nkwadebe dị mfe...
16 Inch DC
Tag: 16 Inch Multi-ọrụ Solar Fan , Dc Bench-ụdị Electric Fan , 12V DC Fans
Dc bench-ụdị ọkụ eletrik na -ejikarị jiri ike anyanwụ na-agbanwe ike, ike na-enye onye na-akwado ya. Nwere ike ichekwa ọkụ eletrik. Nchekwa na-adabere na ọkụ, onye na-agbanye ihe nchebe na-enweghị nchekwa, batrị nwere ike ịnweta ike na ndò dị...
Solar Energy Integrated Square Garden Diana Street Okpu
Tag: Okpokoro Osisi Osisi , Hazie New , Ebube na-ekpuchi n'èzí
Hazie ihe ọhụrụ A na-ahazi ogige ọkụ ogige nke ọma na ikike ikuku nke ọma, ihe na-enweghị mmiri na ogologo ndụ. Enwu ọkụ n'èzí . Nlekọta nlekọta, ihe magburu onwe ya, ntinye mfe, ọkụ ọkụ n'èzí chọrọ. Enwere ike iji ya na ubi na n'ámá....
Ejiji Detachable Solar Fan
Tag: Obere Okpu Igwe Obere Igwe , Mfe Mwepụta Ụdị Fan , Obere obere agbakwunyere
Onye ọhụụ mkpuchi nke ọma bụ nke dị mma ma dị jụụ, enwere ike idozi ya na mkpuchi mkpuchi gị ma mee ka ọ dị jụụ. Mụta ma gbochie akwara okpomọkụ na ụbọchị ọkụ. Onye nkpu okpu okpu na-enye gi ahuhu di omimi ma gbochie gi ikpo oku. A na-eme ya nke dị...
300W Sets Of Solar Generator Integrated System Lighting System
Tag: Ike Igwe Ejiri Ike , Njikọ Elu Ike Elu , Sistem Ịgba Ọkụ nke Na-enwu Ike
Njirimara nke ike nke igwe di ike : 1. Njikwa ọkụ nke anyanwụ, na-enweghị mmanụ, steam, coal na mmanụ ndị ọzọ, na-enwetụ ọkụ ọkụ ọkụ ozugbo, ọ dịghị mkpa ịnweta penny, n'ụzọ zuru ezu melite ogo ndụ na mpaghara ndị na-adịghị ike. 2. Akpado a...
16 Inch Solar Powered Fan akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa 16 Inch Solar Powered Fan ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma 16 Inch Solar Powered Fan kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese 16 Inch Solar Powered Fan wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.